Pane Kwatinoenda Here Kana Tafa? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
bhs chits. 6 pp. 62-70
Chii Chakaitika Kwavari Pavakateerera Satani?
5 Jehovha anoziva zvinoitika kwatiri patinofa, uye anotiudza kuti munhu paanofa, upenyu hwake hunoguma. Kufa zvinoreva kusava neupenyu. Saka kana munhu afa, pfungwa dzake nendangariro hazvirambi zvichirarama kune imwe nzvimbo.* Patinofa tinenge tisisakwanisi kuona, kunzwa, kana kufunga.
16 Satani anoshandisa dzidziso dzenhema kuti tifunge kuti vakafa vachiri vapenyu. Zvimwe zvitendero zvinodzidzisa kuti patinofa, pane chimwe chinhu chiri matiri chinoramba chichirarama kune imwe nzvimbo. Chitendero chako chinokudzidzisa izvozvo here, kana kuti chinokudzidzisa zvinotaurwa neBhaibheri nezvevakafa? Satani anoshandisa nhema kuti abvise vanhu pana Jehovha.
Vamwe vanofunga kuti mweya kana kuti mudzimu wemunhu unoramba uchirarama kana afa. Mamwe Mashoko 16 anotaura zvakawanda nezvenyaya iyi.